Scandals in Nepali film industry – Nepali Movies
Scandals in Nepali film industry
नेपाली चलचित्रमा धेरै हल्लाहरू सार्वजनिक हुन्छन् । रोचक पक्ष त के भने ती हल्लाहरू नै वास्तविकतामा परण्िात भइदिन्छन् । यस वर्ष अपत्यारलिा लाग्ने केही हल्लाहरू आए र सत्य सावित भए । कतिपय घटना अनौठा छन् । यस कुराको सुरुवात गरनि् नायिका नम्रता श्रेष्ठले ।
प्रेमी डिजे तान्त्रिकसँगको (खासमा उनको प्रेमी त अर्कै छ) यौन भिडियो सार्वजनिक भए पनि नम्रताले यसलाई अनौठो मानिनन् । बरु, भिडियो हेर्ने दर्शकलाई भाग्यमानीको संज्ञा दिइन् उनले । अविवाहित नम्रता हाल सार्वजनिक रूपमा निर्धक्कसँग हिँडिरहेकी मात्र छैनन्, विभिन्न उत्पादनहरूको ब्रान्ड एम्बेसडर हुँदै आएकी छन् । उनले नयाँ चलचित्र पनि पाइसकेकी छन् । नम्रता अविवाहित भए पनि डिजे तान्त्रिक चाही बिबाहित पुरुष हुन्.
नम्रताको भिडियो सार्वजनिक भइरहँदा अर्की नायिका पूजा लामाको पनि यसै प्रकृतिको भिडियो सार्वजनिक भयो । यसपटक रोचक के भयो भने भिडियोमा देखिएका तन्नेरीसँगै तत्कालै उनले विवाहसमेत गरनि् । अर्को रमाइलो गरनि् नायिका रञ्जना शर्माले । उनले विवाह विच्छेद मात्र गरनिन्, केही समयपछि फेर िविवाह पनि गरनि् उनै विच्छेदमा परेका निर्देशक श्याम भट्टराईसँग । विवाहेत्तर सम्बन्धमा रमेका नायिका पनि छन् चलचित्र क्षेत्रमा । उनीहरूले न त कानुनी रूपमा विवाह गरेका छन्, न समाजलाई नै बताउन सक्छन् । यस्तो सम्बन्ध राख्नेमा मध्यम रूपमा चर्चामा आएका दुई नायिका छन् । चलचित्रकर्मीहरू नै यसलाई उदारताको चरम नमुना मान्छन् । निर्माता तथा नायक शोभीत बस्नेत भन्छन्, “मन मिल्छ र त्यसले समाजलाई कुनै असर गर्दैन भने त्यस्तो सम्बन्धलाई नराम्रो मान्न हुँदैन ।”
“नाम होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् ।” चलचित्रकर्मीहरूबीच लोकपि्रय यो भनाइलाई उनीहरूले व्यवहारमा पनि उतार्ने गर्छन् । बेलाबेलामा हुने स्क्यान्डल यसैको प्रमाण हो । एकताका नायिका सारंगा श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, “भुवन केसी नभएको भए धेरै नायिका कुमारी नै हुन्थे होला ।” सारंगाको डेढ दशकअघि सार्वजनिक यस भनाइले अहिले पनि सुन्नेलाई कुरीकुरी लगाइदिन्छ । तर, उसैबेला पनि चलचित्र क्षेत्र नलजाएको बताउँछन् निर्देशक प्रकाश साय्मि ।
यी सब घटनाक्रम ले नेपाली समाज येस्तो मामलामा उदार भएको देखाउछ .
namrata ko puti ko photo
nepali puti namrata
www nepaliputiko photo com
Posted by maha at 4:11 am	Tagged with: Bhuwan KC, Pooja Lama, Ranjana Sharma, Saranga Shrestha, Scandal
One Response to “Scandals in Nepali film industry”
Year filled with sex scandals – looking back to 2066 | Movies Nepal says:
[…] Scandals in Nepali film industry […]
Arunima Lamsal’s mother Radha Lamsal talks about her daughter Year filled with sex scandals – looking back to 2066